September 2, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Home 2020 September 02
Cayaaraha September 2, 2020
(Barcelona) 02 Seb 2020. Sida ay shaaca ka qaadeen wargeysyada dalka Spain faahfaahinta kulankii dhex maray abaaha dhalay Lionel Messi ee Jorge Messi iyo madaxweynaha Barca ee Josep Maria Bartomeu. Wargayska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa shaaca ka qaaday inuu soo dhamaaday kulankii dhex maray abaaha dhalay Lionel Messi ee Jorge Messi iyo Sii akhriso
Soomaaliya September 2, 2020
Muqdisho(SONNA) Marka hore iga guddooma salaan iyo tixgalin,marka xigtana qoramadaan kooban ayaan u arkay in ay malaha fiicnaanlahayd in aan soo bandhigo ka dib qiimayn aan ku salaysnayn aragti siyaasadeed balse salka ku haysa Xog-ogaalnimo iyo dhab ka hadal aan isleeyahay ameey tahay xilligii ku haboonaa. Aragtidaan, waxeey isoo baxday ka dib markii aan dib […]Sii akhriso
(Madrid) 02 Seb 2020. Kabtanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa muujiyay sida uu u jecel yahay inuu sii joogo Lionel Messi naadiga ay xilfaltamaan ee Barcelona. Sergio Ramos ayaa sidoo kale muujiyay in joogitaanka Lionel Messi ee horyaalka La Liga ee dalka Spain muhiimad dheeri ah siin doonto heerarka oo dhan. Lionel Messi wali […]Sii akhriso
(Manchester) 02 Seb 2020. Manchester United ayaa si rasmi ah u shaacisay inay dhameystirtay heshiiska xiddiga reer Holland ee Donny van de Beek, kaasoo kaga soo biiray naadiga Ajax Amsterdam. Van de Beek ayaa maray baaritaano caafimaad wuxuuna saxiixay qandaraas shan sano ah, oo uu dooq u heysto inuu ku darsan karo hal sano oo dheeri […]Sii akhriso
RASMI: Neymar oo hoggaaminaya saddex ciyaaryahan oo ka tirsan Kooxda PSG, kuwaasoo uu haleelay Karona Fayras
(Paris) 02 Seb 2020. Neymar Jr ayaa noqday ciyaaryahankii saddexaad ee ka tirsan Kooxda koowaad ee PSG kaasoo laga helay Korona Fayras, kaddib Leandro Paredes & Angel di Maria, sida uu warinayso Wargeyska L’Equipe. Kooxda xafidanaysa horyaalka Faransiiska kowaad bishii la soo dhaafay Final-ka Champions League la ciyaaray Bayern Munich ayaa isniintii shaacisay in Sii akhriso
Sii hayaha Wasiirka Shaqada Oo Shir Muhiim Ah Uga Qeyb Galay Fogaan Aragga
Muqdisho (SONNA)-Sii hayaha Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha bulshada ee Soomaaliya mudane Sadiiq Xirsi Warfaa ayaa fogaan arag kaga qeyb galay kulan heer Wasiiro ah ee dalalka urur Goboleedka IGAD oo looga hadlayay saameynta dhaqaale uu cudurka COVID-19 ku reebay dalalka IGAD. Wasiir Warfaa oo qoraal kooban bartiisa soo dhigay ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka […]Sii akhriso
UK Oo Lacago Ugu Yaboohday Wadamo ay Soomaaliya Ka Midtahay
Muqdisho (SONNA)- Xoghaya arimaha dibadda UK Demonic Raab ayaa ku dhawaaqay 119 Malyan oo ah lacagta UK, taas oo u dhigata 158 Malyuun dolar oo loogu talo galay la dagaallanka karoona iyo gaajada wadamada soo koraya. Mr Demonic Raab ayaa tilmaamay in lacagtan ay tahay mid loogu talo galay wadamada Soomaaliya,Yemen, DRC Congo, South Sudan […]Sii akhriso
Wafdi Uu Hogaaminayo Madaxweynaha Galmudug Oo Gaaray Dalka Jabuuti “SAWIRRO”
Muqdisho (SONNA)- Wafdi balaaran oo uu hoggaaminayo Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye ayaa galabta gaaray magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti. Garoonka Diyaaradaha magaalada Jabuuti ayaa waxaa si diirran ugu soo dhaweeyay Madaxweynaha iyo Wafdigiisa mas’uuliyiin kala duwan oo ugu horreeyo Wasiirka Arrimaha Gudaha Dowladda Sii akhriso
Shaqaalaha Caafimaadka Ee Dalka Suuriya Oo U Dhimanaya COVID-19
Muqdisho (SONNA)-Hey’adda xuquuqda aadnaha ee Human rights watch ayaa maanta sheegtay in shaqaalaha caafimaadka dalka Suuriya ay u dhimanayaan cudurka COVID-19. Hey’addu waxay tilmaantay in dhaqaatiirta iyo shaqaalaha kale ee caafimaadka ee ka shaqeeya dhulka dowladdu maamusho aanay heysan qalabka ka hortaga (PPE) taana ay keentay in cudurku haleelo. Waxaa la Sii akhriso
Madaxweynaha JFS oo caawa furaya wada-hadallada u dhaxeeya dowlad goboleedyada Puntland,Jubbaland iyo DFS
Muqdisho (SONNA)- Agaasimaha warfaafinta Madaxtooyadda Soomaaliya mudane Cabdi Nuur Maxamed Axmed ayaa sheegay in caawa si rasmi ah uu u furmayo kulan ay yeelanayaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wada-hadallada u dhaxeeya madaxda dowlad goboleedyada Sii akhriso